Ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela omkhulu kunalokho obekucatshangwa ngaphambili ezilwaneni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukushintsha kwesimo sezulu njengamanje kuyinselelo yazo zonke izinto eziphilayo. Yize kunezinhlobo ezithile ezizozuza, ezinye eziningi zizophela, kushiye isikhala esijulile ku-ecosystem abahlala kuyo njengamanje.
Ngokusho kocwaningo olusha olwenziwe ngokubambisana yi-University of Queensland (Australia) futhi lwashicilelwa kumagazini wesayensi 'i-Nature Climate Change', Ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela omkhulu kunalokho obekucatshangwa ngaphambili ezilwaneni.
Ezinye izilwane ezingase zingaboni ilanga liphuma esikhathini esifushane noma esiphakathi yizinyamazane nezindlovu. Okuxakayo ukuthi elinye lamasu abo okusinda asebasebenzisile kuze kube namuhla manje yinkinga yabo enkulu. Futhi ngukuthi, ukunakekela ingane eyodwa noma ezimbili kunezinzuzo zako endaweni yemvelo, ngoba kwakulula ngabo bonke ukufinyelela ebudaleni.
Nokho, Ezweni lapho ushintsho lwenzeka ngokushesha okukhulu, kuphela labo abanezizukulwane ezinkulu abayoba nethuba elihle lokusinda.
Abaphenyi, abathi umthelela obe nawo kulezi zilwane ubukelwa phansi, basebenzise imininingwane evela ezifundweni eziyi-136 ezinhlotsheni eziyi-120 zezilwane ezincelisayo kanye nezinyoni ezingama-569. Ukuhlaziya ama-demographic curves, amazinga okuzala, izindawo kanye nokuguquka kwesimo sezulu kwezinto ezithathwa njengezisongelwa yi-International Union for Conservation of Nature (IUCN) Bakwazile ukuthola ukuthi ezinhlotsheni ezingama-873 zezilwane ezincelisayo ezisohlwini, ezingama-414 zinobunzima bokuzivumelanisa nokuguquka kwesimo sezulu; maqondana nezinyoni, isilinganiso singama-23,4% (izinhlobo ezingama-298).
Ukuguquka kwesimo sezulu, okwenziwe kwaba kubi ngabantu, kungaholela ekuqothulweni kwezilwane eziningi emhlabeni jikelele. Yize kulindeleke ukuthi izinga lokushisa eliphakathi komhlaba lihlale lingaphansi kuka-2ºC uma kuqhathaniswa ne-Industrial Revolution, kososayensi ukufeza le nto kuzoba nzima kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela omkhulu kunalokho obekucatshangwa ngaphambili ezilwaneni